NAV oo ilaa hada 23 qof siisay hal milyan. - NorSom News
NAV oo ilaa hada 23 qof siisay hal milyan.
Sadex isbuuc kadib, hey´adda NAV ayaa bilowday inay dib ugu noqoto go´aamo ay horey uga gaartay dad si qaldan loogu xukumay inay soo celiyaan taageero dhaqaale oo la siiyay. Halkan kasii akhri.
Sida uu qoray wargeyska Dagsavisen, ilaa hada hey´adda NAV ayaa soo uruurisay xogta 1000 qof oo go´aan qaldan kiisaskooda laga gaaray. Waxeyna fureen kiisaska 500 qof, halka 57 qof go´aan laga gaaray kiiskooda.
NAV ayaa wargeyska Dagsavisen u xaqiijiay in 23 qof oo dadka go´aanada laga gaaray kamid ah ay heleen isku dar lacag u dhiginta hal milyan oo kr.
NAV ayaa dhanka kale sheegtay inay shaqaaleysiiyeen 60 qof oo si gaar ah uga shaqeeyo kiisaskan.
Isku dar dad gaaraya 2400 qof ayaa si qaldan loogu xukumay inay soo celiyaan lacag ay xaq u lahaayeen oo la siiyay, halka ku dhawaad 50 qofna xabsiyo lagu xukumay.
Xigasho/kilde: Nav har nå tilbakebetalt 1 million kroner til 23 personer.
Previous articlePakistan oo Norway ka dalbatay faah-faahinta kitaab quraan ah oo lagu gubay Kristiansand.
Next articleWasiirka qoyska oo diidan inuu raali-galin siiyo qoysaskii dowlada kaga guuleystay kiisaska barnevernka.